सम्पादकीय Archives - Sawal Nepal
पत्रकार महासङ्घका ६पूर्वाध्यक्ष पुरस्कृत
नेपाल पत्रकार महासङ्घ तनहुँका ६ पूर्वाध्यक्ष पुरस्कृत हुनुभएको छ । शाखाको आज आयोजित बाह्रौँ साधारणसभाका अवसरमा महासङ्घमा स्थापित ‘सुरज गुरुङ स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार’, ‘टीकानिधि ढुङ्गाना पत्रकारिता पुरस्कार’ र ‘भर्लेली केवलबहादुर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार’ पूर्वाध्यक्षलाई प्रदान गरिएको छ ।सुरज गुरुङ पुरस्कार–२०७४ मुक्तिनाथ खनाल, २०७५ प्रकाशचन्द्र भट्टराई र २०७६ डम्बरबहादुर अधिकारीलाई प्रदान गरिएको छ । उक्त पुरस्कारको
रअका प्रमुख गोयल नेपालमा, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र शहिदको रगतको अपमान
भारत सरकारको गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामान्तकुमार गोयल नेपाल आएका छन् । उनी नेपाल आउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । तर उनी नेपाल आएको बारे एक समय भारतले अतिक्रमित जमीन फिर्ता नगरे सुरुङ्ग युद्ध लड्ने बताउने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको अहिलेको सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा नै बेखबर बनेको छ । रअका प्रमुख र प्रधानमन्त्री केपी
काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन् । बजेट अधिवेशनको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जीर्ण शरीरलाई आराम दिनआग्रह गरे । उनले भने, ‘अरु अरुलाई आरोप प्रत्यारोप गर्नुभन्दा आत्मलोचना गर्नुपर्छ, यो देशमा ३८ जना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्, कुन प्रधानमन्त्रीलाई कसले सम्झि
नारायण ढुङ्गाना काठमाडौं । काठमाडौँको जोरपाटीस्थित चामुन्डा माध्यामिक विद्यालय अगाडिको सडकमा शुक्रबार बिहान ११ बजे मजदुरहरुको लामो लाइन थियो । स्वयंसेवकहरु एक मिटरको दूरी कायम गराएर लाइन मिलाउँदै थिए । कोही मजदुरका व्यक्तिगत विवरण भर्दै त कोही ज्वरो नाप्नमा व्यस्त । स्कूल परिसरमा रहेका अन्य युवा खाना खुवाउने काममा सक्रिय थिए । नारायणटार युवा क्लबको
सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुलापारिको भारतीय सीमा धार्चुलामा एक महिना पाँच दिनदेखि अलपत्र रहेका कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका–११ शिसैयाका वीरसिहं विक नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइनमा प्रवेश गर्दा निकै खुशी थिए । “ओहो भगवान् आफ्नो ठाउँ पुगियो” भन्दै आकाशतिर हेर्दै खुशी व्यक्त गरिरहेका वीरसिंहका आँखाबाट खुशीका आँसु झरिरहेको थियो । उनी सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित तरिकाले घरसम्म ल्याउने वातावरण
बिशेष सम्पादकीय झापा जिल्लामा र बिशेष गरेर दमक, बिर्तामोड लगायतका शहरी क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा बिभिन्न मिस झापा, मिस दमक, मिस एसएलसी लगायत बिभिन्न नाम जोडेर प्रतियोगिताहरु गराइने गरेको छ । यस्ता प्रयिोगिताहरु हुनु राम्रो हो । प्रतिभाहरुको खोजी हुनु राम्रो हो । तर यस्ता कार्यक्रमहरु कहाँबाट अनुमति लिएर हुदैछन् ? कसरी हुदैछन् ? यस सम्बन्धमा